Ifulethi Eliseviswayo le-Shepparton Lakeside - I-Airbnb
Ifulethi Eliseviswayo le-Shepparton Lakeside
Shepparton, Victoria, i-Australia
I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Alex
U-Alex uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
Kungakhathaliseki ukuthi ufuna indawo yokuhlala enamasevisi e-Shepparton, ukuhlala okufushane noma kwesikhathi eside, noma ukuhamba kwezinkampani noma kokuzilibazisa - sikwesekile.
Ifulethi Eliseviswayo Elinamakamelo amabili linikeza ifulethi eliseviswayo elinamakamelo amabili elisenkabeni ye-Shepparton. Ifulethi lethu elinezitezi ezimbili litholakala ngokuqondile eVictoria Park Lake kanye ne-Shepparton Art Museum entsha. Ihlelwe ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo kusuka ezitolo zasendaweni, izindawo zokudlela, izimakethe ezinkulu, i-Shepparton Law Court Complex, ne-Shepparton’s CBD.
< p > Siyazamukela izivakashi ezihamba ngebhizinisi noma ezokuzilibazisa. Ifulethi lethu lesimanjemanje, elinesitayela futhi likanokusho eliseviswayo e-Shepparton ngokuqinisekile lizokukhanga.
Ifulethi lethu elinamakamelo amabili linikeza ikamelo lokulala elikhulu elinombhede omkhulu kanye nomatilasi ukuze kuqinisekiswe ukulala kahle ebusuku. Indlu yethu ikamelo lesibili linikeza umbhede we-Chiropedic ongahlanganiswa nokwakha umbhede omkhulu noma uhlukaniswe ukuze wakhe imibhede emibili elala umuntu oyedwa ukuze ihambisane nezimfuneko zakho.
Ngokuhlangenwe nakho okungaphezu kweminyaka engu-20 embonini yendawo yokuhlala, sizibophezele ekukunikezeni ukuhlala okungenakulibaleka.
Ngeshwa, asizamukeli izilwane ezifuywayo.
< imvelaphi yetafula ="https://www.lakesideservicedapartment.com.au/Lakside_serviced_Apartment_Images/homconfirmation20.jpg" umngcele = "0" cellspacing = "0" cool = "" gridi = "16" gridy = "16" showgridx = "" showgridy = "" usegridx = "" usegridx = "" usegridx = "" usegridy = "> <br />	< tbody > <br />	< tr <br />	> <td colspan ="13" content = "" csheight = "127" xpos = "80" >
Sicela uvakashele iwebhusayithi yethu kokuthi lakesideservicedapartment.com.au noma usithumelele i-imeyili ku < a href = "https://lakesideservicedapartment.com.au/contact-us/" >kesideservicedapartment.com.au
Hlola ezinye izinketho ezise- Shepparton namaphethelo